Alahady fahaefatra ny paka – 11/05/2014 – Tenin’Andriamanitra – Ecar Sainte Anne Anjomakely
Vakiteny voalohany: Boky mitantara ny Asan’ny Apôstôly (Asa 2, 14a. 36- 41 )
Nataon’Andriamanitra ho Tompo sy Kristy iny lehilahy iny
Nony tonga ny andro Pantekôty, dia nitsangana niaraka tamin’ny iraika ambin’ny folo lahy i Piera ka nanao antso avo tamin’ny Jody hoe: “ Aoka ho fantatry ny taranak’i Israely rehetra marimarina, fa iny Jesoa nofantsihanareo tamin’ny Hazofijaliana iny, no nataon’Andriamanitra ho Tompo sy Kristy”. Voatsindron’izany teny izany ny fon’ny olona, ka hoy izy tamin’i Piera sy ireo Apôstôly namany: “Inona àry, ry rahalahy, no hataonay?” Dia hoy i Piera tamin’izy ireo: “Mibebaha, ary aoka samy hatao Batemy amin’ny Anaran’i Jesoa Kritsy ianareo rehetra mba hahazo ny famelana ny fahotanareo, dia handray ny Fanahy Masina homena anareo. Satria ho anareo no nanaovana ny fampanantenana, sy ho an’ny zanakareo, ary ho an’izay rehetra any lavitra any, rehefa mety ho nantsoin’ny Tompo Andriamanitsika koa”. Ary nanambara sy namporisika azy tamin’ny teny maro hafa koa izy nanao hoe: “Vonjeo ny tenanareo mba ho afaka amin’ity taranaka ratsy ity”. Dia natao Batemy izay nandray tsara ny teniny, ka niampy tokony ho telo arivo ny isan’ny mpianatra tamin’izany andro izany.*
Vakiteny faharoa: Taratsay voalohany nosoratan’i Md Piera Apôstôly (1 Pi 2, 20b- 25)
Indro ankehitriny fa tafaverina amin’ny Mpiandry sy Mpitondra ny fanahinareo.
raha manao soa ianareo no ampahorina, ka miaritra amim-pandeferana, dia izany no ankasitrahan’Andriamanitra. Sady izany koa no niantsoana anareo, satria i Kristy nijaly ho anareo koa, ka namela fianarana ho anareo, mba hanarahanareo ny diany: dia Izy, ilay tsy nanota akory, na mba niloa-bava nilaza fitaka velively; Izy ilay notevatevaina, nefa tsy nandrahona, fa nanolo-tena tamin’ny mpitsara azy tsy ara-drariny; Izy ilay nitondra ny fahotantsika tamin’ny tenany teo ambony hazo, mba ho faty isika raha ny amin’ny ota, fa ho velona kosa amin’ny fahamarinana; ary ny dian-kapoka taminy no nahasitrana anareo. Fa efa toy ny ondry nania ianareo, ary indro ankehitriny efa tafaverina amin’ny Mpiandry sy Mpitondra ny fanahinareo.
Evanjely masina nosoratan’i Md Joany (Jo 10, 1- 10)
Izaho no vavahadin’ny ondry.
Tamin’izany andro izany, i Jesoa nilaza tamin’ny Farisianina hoe: “Lazaiko marina aminareo, fa izay tsy miditra amin’ny vavahady ho amin’ny valan’ondry, fa mananika amin’ny hafa, dia mpangalatra sy jiolahy; fa izay miditra amin’ny vavahady no mpiandry ondry. Ka ny mpiandry vavahady mamoha azy, ny ondry mihaino ny feony, ary izy miantso ny azy amin’ny anarany avy sy mamoaka azy. Rahefa tafavoakany avokoa ny azy, dia mialoha izy, ka manaraka azy ny ondry, satria mahalala ny feony: ary ny olon-kafa tsy arahiny, fa andosirany, satria tsy fantany ny feony.”
Nolazain’i Jesoa taminy izany fanoharana izany, nefa tsy azon’izy ireo izay nolazainy tamin’izany. Ka hoy indray i Jesoa taminy: “Lazaiko marina dia marina aminareo fa Izaho no varavaran’ny ondry. Mpangalatra sy jiolahy izay rehetra tonga talohako, fa tsy nihaino azy ny ondry. Izaho no varavarana. Raha Izaho no idiran’ny olona, dia hovonjena izy, ka hiditra sy hivoaka, sady hahita hanina. Ny mpangalatra no tonga mba hangalatra sy hamono ary handringana, fa Izaho no avy kosa dia mba hananan’ny ondry fiainana, sady hananany azy be dia be”.